Iwebhsayithi yobuqhetseba Yintoni i-Phishing, ungayiphepha njani kwaye luyintoni uxanduva lweebhanki kunye neebhanki zokonga ngokuchasene nokuloba | Iindaba zeGajethi
Iwebhsayithi yobuqhetseba Yintoni i-Phishing, ungayiphepha njani kwaye luyintoni uxanduva lweebhanki kunye neebhanki zokonga ngaphambi koloyiso
«UkuPhatha ligama lekhompyuter elichaza uhlobo lolwaphulo-mthetho olwenziweyo ngaphakathi komkhonyovu, kwaye oko kwenziwa ngokusebenzisa uhlobo oluthile lobunjineli kwezentlalo olubonakaliswa ukuzama ukufumana ulwazi oluyimfihlo ngobuqhetseba. "
Leyadlulayo yi inkcazo eyenzeka kwifayile ye- Wikipedia kwi-Phishing, indawo apho kunikwa nengcaciso yemvelaphi yegama yobuqhetseba kwaye apho unokufumana khona ulwazi olunomdla kakhulu kwabo bafuna ukwazi okungakumbi Imbali yobuGcisa.
PKwabo bangenziwanga kangako kwikhompyuter, ndikushiyela le enye inkcazo ngokusekwe phantse kukusebenzisa okukodwa okwangoku okunikezelwe kwigama lobuGqirha kwaye wonke umntu uya kuqonda:
Umntu ofuna ndikuphange Iikhowudi zokungena ebhankini yakho okanye kwirejista yekheshi kwi-Intanethi ikuthumela i-imeyile apho, uzenza ngathi uyibhanki yakho, ubuza igama lakho benzisi kunye password. Ukuba uthe wabetha umlobothi wakho ("ubuqhetseba" buvela "ekulobeni" okuthetha ukuloba) kwaye unike igama lakho kunye negama lokugqitha, isela liya kungena ebhankini yakho okanye ebhankini yokonga lize libe imali onayo kwiakhawunti yakho.
Yuyakwazo oko yintoni eyoyikisayo, ngoku into ebalulekileyo kukwazi ekufuneka sikwenzile ukunqanda ukuwela emgibeni kwaye siveze idatha yethu yokufikelela okuyimfihlo kwiziko lethu lezemali.
Ungayiphepha njani i-Phishing
Imibutho yezemali (iibhanki kunye neebhanki zokonga) soze Bayakucela ukuba utyhile ipassword yakho nge-imeyile (i-imeyile). Ke ukuba ufumana i-imeyile ecela iiphasiwedi zakho eziyimfihlo, ungayihoyi kwaye uyicime ngqo kwaye ukuba ubona kufanelekile, nxibelelana naye. Iqela lolwaphulo-mthetho kwiKhompyuter kwaye wazise ngayo.
AInxalenye yoku kungentla kuya kufuneka ukhumbule ukuba ayonelanga Ngokucima ii-imeyile ezicela iiphasiwedi zakho, kuya kufuneka unike ingqalelo kuyo nayiphi na i-imeyile oyifumanayo, ekucingelwa ukuba ivela ebhankini okanye ebhokisini. Kutheni, kulula kakhulu, masithi Ibhanki yakho ikuthumela isibonelelo wento kwaye ucofa kwikhonkco kwi-imeyile ukuze ubone umnikelo onombuzo. Emva koko ungene kwiwebhusayithi eyenza isithembiso kwaye emva kokuyifunda ucinga "okoko ndilapha, ndiza kujonga iintshukumo zam kunye nokulingana kweakhawunti yam." Emva koko ujonge indawo yokungena kwiakhawunti yakho, ungene okanye ubhalise, kwaye ufake idatha yakho yobuqu. Akulunganga ...
SUkuba i-imeyile ithunyelwe kuwe yibhanki yakho yokwenyani, akukho nto yenzekayo, iya kuba kukufikelela kwiakhawunti yakho njengoko uqhele ukwenza kunye nokuphela kwebali. Kodwa ukuba i-imeyile ithunyelwe kuwe ngomnye umntu odale iphepha lewebhu elifana nelo lebhanki yakho, usandul 'ukukroba ngenxa yokuba ubanikile idatha yakho eyimfihlo kwaye ngoku unokufikelela kwiakhawunti yakho. Eyona nto imbi kakhulu kukuba ukuba isela liyayazi indlela yokwenza ngokuncinci, uya kuyishiya iwebhusayithi engeyiyo Ngaphandle kokuqonda ukuba izitshixo zakho zibiwe Kwaye mhlawumbi xa ufumanisa ukuba lihambile ixesha
POkanye ayonelanga ukungazithembi ii-imeyile ezicela amaphasiwedi, Kuya kufuneka ungathembi konke abo bathi bavela ebhankini. Kuya kufuneka uthathe la manyathelo alandelayo:
Njengothintelo lokuqala, eyona nto intle kwaye ekufuneka usenza kukutyelela ibhanki yakho okanye ukonga imali ukubhala ngqo idilesi yakho yewebhu kwindawo yedilesi yesikhangeli sakho.
Akukho bhanki iya kukucela idatha eyimfihlo kwi ayikhuselekanga kwaye ukuba yenza ngcono ndingatshintsha iibhanki. Ukufumanisa ukuba iseva ikhuselekile, jonga ibha yedilesi kwaye ubone ukuba idilesi yewebhu yi-http okanye i-https. Umzekelo, ibhanki yakho inokuba kule dilesi http://www.mibanco.com/ kodwa xa ikucela iphasiwedi, kufuneka ibacele kwiphepha elikhuselekileyo lohlobo o . Qaphela ukuba kuzo zombini iimeko idilesi iqala nge https A ebonisa ukuba ikwiserver ekhuselekileyo. Khumbula ukujonga iifayile ze «S» ukhuseleko olongezelelekileyo.
Ukuba, ngaphandle kwesilumkiso esingentla, ungena ebhankini ngeposi, soloko uqaphela ukuba idilesi ebonakala kwifayile ye ibha yedilesi ihambelana ngqo nedilesi yebhanki yakho. Amaxesha amaninzi, iiwebhusayithi ezenza ngathi yibhanki yakho zikhetha igama elifanayo ukuzama ukukukhohlisa.
Ukuba unamathandabuzo amancinci malunga nokuba yeyiphi na iwebhusayithi ekuyo yibhanki yakho ngenene, kungcono sukufaka iipassword zakho kwaye unxibelelane nebhanki yakho okanye ibhanki yokonga ngokusebenzisa umnxeba wenkonzo yabathengi ukuqinisekisa ubungqina bendawo leyo.
Okokugqibela, eyona nto ibaluleke kakhulu, nxibelelana nebhanki yakho kwaye ubenze bachaze ngokuthe ngqo ukuba yeyiphi imigaqo-nkqubo yokhuseleko abayisebenzisayo ukukhusela ukubiwa kwezitshixo zakho, ukuba bakunike eyona dilesi yokufikelela kwiphepha labo elikhuselekileyo kwaye bayakuchaza indlela yokwenza xa ucinga unokuba Ixhoba lobugebenga.
Luthini uxanduva lweebhanki kunye neebhanki zokonga ngokuchasene ne-Phishing?
Kule meko akukho nto imiselweyo, kodwa ngokoluvo lwam ezinye izinto (okanye iingcali zazo zekhompyuter) kufuneka zikhathazeke ngokungavumeli abasebenzisi abakhohlakeleyo ukuba basebenzise ikhonkco ngqo kwimifanekiso yequmrhu (ukwenza iposi ithembeke ngakumbi) kunye nezinto ezifanayo ezincedayo baxhasi emsebenzini wakho.
MOkwangoku, kuya kuthi kuthi ukuba singaweli kwelinye lala maqhinga. Uyazi, Yonke imihla kuzalwa umntu ongalumkanga, ungabi ngomnye wabo. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iwebhsayithi yobuqhetseba Yintoni i-Phishing, ungayiphepha njani kwaye luyintoni uxanduva lweebhanki kunye neebhanki zokonga ngaphambi koloyiso
Unokwenza imali ngeYouTube sitsho
Ndifuna ukufunda into malunga nokufumana imali eyongezelelweyo ngokuzalisa uphando kwaye kukho le webhusayithi.
Ukuphendula kuwe Unokwenza iMali ngeYouTube
Sebenzisa i-Messenger ngaphandle kokufaka nantoni na kwikhompyuter yakho nge-MSN Web Messenger
UMeme wam wokuqala. Kutheni ndibhala ibhlog yam. Yintoni imeme?